မြင့်မားသောအမြန်နှုန်း Pvc တံခါး China Manufacturers & Suppliers & Factory
မြင့်မားသောအမြန်နှုန်း Pvc တံခါး - တရုတ်ထံမှထုတ်လုပ်သူ, စက်ရုံ, ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်း
( 24 များအတွက်စုစုပေါင်း မြင့်မားသောအမြန်နှုန်း Pvc တံခါး ထုတ်ကုန်များ)
PVC ကြိတ်စက် Shutter အမြင့်မြန်နှုန်းတံခါး မြင့်မားသောအမြိုးအနှယျ PVC roller ရှပ်တာတံခါးကိုအလင်းနှင့်လှပသော, အကြမ်းခံ, အနိမ့်သောစျေးနှုန်းမြင့်မားကုန်ကျစရိတ်စွမ်းဆောင်ရည်ဖြစ်ပါသည်, ဖောက်သည်များကုန်ကျစရိတ် savings.The utility...
လျင်မြန်သောစက်မှုဇုန် PVC တံခါးကို
လက်မှတ်: ISO9001, CE
အဓိကအားဖြင့်စက်မှုဇုန် applications များများတွင်အသုံးပြုတံခါးကိုဖွင့် PVC မြန်နှုန်းမြင့်တံခါးကို roller ။ သူတို့ကယေဘုယျအားဖြင့်လူသိများအပိုင်းတံခါးနည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာအဆင့်မြှင့်တင်မှုများ, PVC ထည်တံခါးများသို့မဟုတ် roller ဘက်မှာပြတင်းပေါက်ရှပ်ဖြစ်ကြသည်။ အဓိကကွာခြားချက်အကြမ်းခံဆောက်လုပ်ရေးမြင့်မားတဲ့ operating...
မြင့်မားသောအမြန်နှုန်း PVC တံခါး
မြင့်မားသောအမြန်နှုန်း PVC တံခါး ထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေးနှင့်ဂိုဒေါင် -high မြန်နှုန်းတံခါးသည်ကောင်းမွန်သောရွေးချယ်မှု, နောက်ထပ်သတင်းအချက်အလက်များအဘို့ကိုအောက်တွင်ကြည့်ပါကျေးဇူးပြုပြီး: အအေးအခန်း high-speed ကိုတံခါးများအဓိကအားဖြင့်စက်မှုဇုန် applications များများတွင်အသုံးပြုတံခါးကိုစနစ်များ, ဖြစ်ကြသည်။...
PVC မြန် Roll Up ကိုတံခါး
ထုပ်ပိုး: foam + ပုံး + ပူဖောင်းအိတ်
Supply နိုင်ခြင်း: 800 sets/month
PVC မြန် Roll Up ကိုတံခါး ကုန်ပစ္စည်းအသေးစိတ်: PVC Fast Door Grey,Yellow grid,Purple,Green,Light green,Black,Perforated Yellow grid,White,Blue,White grid,Sky Blue,Yellow,Orange,Red Color curtain:0.8mmthickness. Transparent curtain:1.2mm. Function:insect prevention Reinforce girder Aluminum alloy 45mm...
ပြင်ပနှင့်အတွင်းပိုင်း stack ခေါက် PVC အထည်အလိပ်တံခါး
ပြင်ပနှင့်အတွင်းပိုင်း stack ခေါက် PVC အထည်အလိပ်တံခါး T ကသူစက်မှုဇုန် stack တံခါးကိုထိုကဲ့သို့သောအပူထိန်းသိမ်းခြင်း, အအေးထိန်းသိမ်းခြင်း, အင်းဆက်ပိုးမွှားသက်သေပြ, windproof, dustproof နှင့် soundproof အဖြစ်အမျိုးမျိုးသောလုပ်ဆောင်ချက်များကိုရှိပါတယ်။ ဒါဟာ high-performance...
အလိုအလျောက် PVC မြန်ကြိတ်စက် Shutter တံခါး Up ကိုခေါက်
အလိုအလျောက် PVC မြန်ကြိတ်စက် Shutter တံခါး Up ကိုခေါက် Anti-အင်းဆက်ပိုးမွှား, windproof, Anti-ဖုန်မှုန့်, soundproof, Anti-မီး, Anti-အနံ့နှင့် natual အပူနှင့် Chilling insulator တွင်လည်း၏စွယ်စုံလုပ်ဆောင်ချက်များကိုနှင့်ပြည့်စုံရှန်ကျန်း Hongfa အလိုအလျောက်တံခါးကုမ္ပဏီ, နေဖြင့်ထုတ်လုပ်မှု၏အဆင့်မြင့် technique...
ကားဂိုဒေါင်နှင့်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးအဘို့အလိုအလျှောက် Rolling Shutter တံခါး
မြင့်မားသောအမြန်နှုန်း Pvc တံခါး မြင့်မားသောအမြန်နှုန်း PVC တံခါး မြင့်မားသောအမြန်နှုန်း stack တံခါး မြင့်မားသောအမြန်နှုန်း PVC stack တံခါး မြင့်မားသောအမြန်နှုန်းတံခါး PVC မြင့်မားသောအမြန်နှုန်း Rapid stack တံခါး မြင့်မားသောအမြန်နှုန်းဇစ် PVC တံခါး မြင့်မားသောအမြန်နှုန်းတံခါး RITES-Hite